Fa aiza no tokony handeha? Na izany ny voalohany na ny fahafolo, ny boky, noho ireo porofo ny fiaran-dalamby misy mety hitarika ho amin'ny adin-tsaina, fifanjevoana, ary tahotra tanteraka sao very. tsy manahy – satria nangoninay eto ny lisitry ny siny ny 5 Eoropa tsara indrindra kapitaly mba handeha ho lamasinina. Mipetraha, jaigrafy ny, ary afa-toerana ho ny tsara indrindra Frantsa baguettes, satria isika dia handeha amin'ny mitaingina.
Atsaharo ny Louvre for-pijery amin'ny Mona Lisa, na mampihatra ireo glutes amin'ny fihanihana ny Arc De Triomphe. Ankafizo ny sakafo hariva Cruise ny Rhin, hamangy sasany BOUTIQUES frantsay, ary raiso ny Tilikambon'i Eiffel manjelanjelatra amin'ny fiainana amin'ny takariva.
Mazava ho azy, Paris dia mihoatra noho ny afovoan-tanàna. Ny tànana hafa kely ny renivohitra no an-trano ny roa tapitrisa, izay midika hoe afaka mandany herinandro eto tsy misy tena Scratching ho etỳ ambonin'ny zavatra manana ny tolotra. Getaway ho andro iray lavitra avy amin'ny tafiny tao amin'ny Pont Alexandre III sy ny loha tsy mahazo manao Versailles, aiza ny Royal Palace Mbola manjaka na dia eo aza ny toerana banga ambony indrindra hatramin'ny 1700 ny. Day tapakila fotsiny € 20 ary ahitana fidirana ho any amin'ny Palace, ny zaridaina, ary ny maro hafa. Tsara kokoa, mihazakazaka fiaran-dalamby avy any afovoan-tanàna mivantana amin'ny Palace, izay mahatonga mahazo misy tsio-drivotra. Io fomba ofisialy interconnectedness mahatonga Paris iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny fiaran-dalamby Eoropa kapitaly nandehanany.
Ny iray amin'ireo manokana toerana tena tanàna ary adiny roa monja avy any Paris lainga ny renivohitry ny Fanjakana: London. Io mpandrendrika dia vilany ny kolontsaina an-trano ny whopping sivy tapitrisa ny olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra. Avy posh Chelsea ny panahy Soho, hahita hetsika ho an'ny olona rehetra amin'ny fety ianao. Trondro iray amin'ireo kira farany alohan'ny loha ny ny Globe Shakespeare sy ny mahavita ny alina tao amin'ny Shard, ny avo indrindra tilikambo teo London.
Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha Eurostar dia mitondra anao avy any Paris mankany afovoan'i London afaka adiny roa mahery, izany hoe ianao mandeha handany kely kokoa ny fotoana sy ny fotoana bebe kokoa adventuring. Noho izany, heverinay fa i London dia iray amin'ireo renivohitra eoropeana tsara indrindra afaka mandeha amin'ny lamasinina.
Miavaka amin'ny kapitaly Eoropa Andrefana, Prague no renivohitry ny Repoblika Tseky any Eoropa Atsinanana, ary iray amin'ny malaza indrindra Eoropa Afovoany tanàna. Home ho iray amin'ireo trano famakiam-boky malaza indrindra eo amin'izao tontolo izao, ny Klementium, Prague dia manapariaka ny kolontsaina manodidina isaky ny zorony. Tsidiho ny Kintana Clock, ny tranainy indrindra famantaranandro miasa eto amin'izao tontolo izao. Mandehandeha manodidina Kianjan'i Old Town, izay rarivato eny an-dalambe ary ny sakeli-dalana eto pedestrianized hoe afaka mandany ora maro nirenireny tsy misy ahiahy.
Eoropa dia tontolo midadasika sy miovaova izay ny Union dia midika hoe mora kokoa noho ny hatramin'izay ny mandeha lamasinina. Araraoty ny firenena borderless ny handeha ho any ireo kapitaly manan-tantara eo amin'ny fotoana. Skip ny aretin'andoha ny seranam-piaramanidina sy ny vahoaka ary ny overpriced fiaramanidina sakafo sy mampiasa ny fiaran-dalamby mba handeha. Na mitsambikina tao an-tsambo-paritra lalana na mandany kely fanampiny ho an'ny lalamby haingam-pandeha, ianao dia mankafy ny lalamby, ny fitsangatsanganana, ary maro hafa koa.
Efa nahazo anao rakotra ny Travel torohevitra. Ary tonga ny fotoana au livre ny sasany saran-dalana! Save A Train dia toerana hividianana tapakilan'ny lamasinina.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best European Capitals To Travel By Train” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/european-capitals-travel-train/?lang=mg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
renivohitra kapitaly europeantravel europetrains eurotrip London Train Travel travelfrance travelgermany travelnetherlands